एकपटक चार्ज गरेपछि ११६ किलोमिटरसम्म कुद्ने भारतीय ईलेक्ट्रिक स्कुटर नेपाली बजारमा, कति पर्छ मूल्य ? - Dainik Online Dainik Online
एकपटक चार्ज गरेपछि ११६ किलोमिटरसम्म कुद्ने भारतीय ईलेक्ट्रिक स्कुटर नेपाली बजारमा, कति पर्छ मूल्य ?
प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १ : ५९
काठमाडौं । पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने भन्दै पछिल्लो समय विश्वभर नै ईलेक्ट्रिक (विद्युतीय) सवारीको उत्पादन र प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा मात्रै नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको बिक्री बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपाली बजारमा अहिले करिब आधा दर्जन ब्राण्डका विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु छन् । यसबीचमा भारतीय ईलेक्ट्रिक स्कुटर निर्माता कम्पनी प्युअर ईभी पनि नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आइपुगेको छ ।
प्युअर इभीले आफ्ना दुई ओटा ईलेक्ट्रिक स्कुटरको बिक्री नेपालमा शुरु गर्दै छ । प्युअर ईभीका ई–प्लुटो ७ जी र ई–ट्रान्स प्लसको केही दिनमै नेपालमा बिक्री शुरु गर्दै छ ।
प्युअर ईभीका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता ह्वाइट लोटर्स मोटर्सले काठमाडौंको नक्सालमा शोरुम नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । अबको १ साता भित्रै यी दुई स्कुटरको बिक्री शुरु गरिने ह्वाइट लोटस मोटर्सका म्यानेजिङ डाइरेक्टर अशोक खड्कीको भनाइ छ ।
ई–प्लुटो ७ जी स्कुटरमा २.५ किलोवाटको ब्याट्री र १.५ किलोवाटको मोटर छ । यो स्कुटरलाई एकपटक चार्ज गर्दा ११६ किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिने कम्पनीको दाबी छ ।
यस्तै, ई–ट्रान्स प्लस स्कुटरमा १.२५ किलोवाटको ब्याटी र २५० वाटको मोटर छ । यसलाई एक पटक चार्ज गर्दा ६२ किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिने कम्पनीको दाबी छ ।
मूल्यका हिसावले ई–प्लुटो ७ जी स्कुटर नेपाली बजारमा २ लाख ४९ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुने छ । यस्तै, ई–ट्रान्स प्लस स्कुटर भने १ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुने छ ।
कम्पनीले दुईवटै स्कुटरमा ३ वर्षको वारेन्टी र २ वर्षसम्म फ्रि सर्भिसिङको स्किम पनि दिएको छ ।
भारतमा बिक्री हुने विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीमध्ये प्युअर स्कुटरले २० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको बताइन्छ । भारतीय बजारमा राम्रै खाले प्रतिक्रिया पाएको कम्पनीले नेपाली बजारमा पनि युवा पुस्ताको मन जित्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमाले नेतृत्वलाई योगेश भट्टराईको सुझाव : बाहुबली जत्था सडकमा देखाउने काम बन्द गरौं
काठमाडौं । पदच्युत भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेभित्र पछिल्लो समय विभिन्न
विप्लव र बादलबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता
नेपालमा कोराना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर तीन हजार